“Portrait”, “paysage”…: mampianatra sary koa ny School art - ewa.mg
“Portrait”, “paysage”…: mampianatra sary koa ny School art
News - “Portrait”, “paysage”…: mampianatra sary koa ny School art
Nisokatra, ary nandray mpianatra,
ny alarobia 02 desambra 2020 teo ny ivontoeram-piofanana School art
amin’ny alalan’ny fanaovana sary “portrait”, “paysage”. Manofana
ankizy ho tonga matihanina eo amin’ny tontolon’ny zavakanto amin’ny
alalan’ny fampianarana omena azy ireo. Hanomezan-danja ny
talentan’ny tsirairay izany, hiderana an’Andriamanitra, raha ny
nambarany. Misy mpampianatra 8 mianadahy ao amin’ny sekoly
ankehitriny. Tsy mifidy salan-taona ny fampianarana “art” ao, fa na
olon-dehibe na ankizy, rehefa liana amin’ny zavakanto, mety avokoa.
“Isaky ny voalohan’ny volana, misy foana ny fampianarana sy
fampiofanana amin’ny alalan’ny zavakanto eto amin’ny School
art”, hoy i Nofy Ramiadason, talen’ny sekoly. Misokatra
amin’ny fiaraha-miasa rehetra izy ireo, amin’ny alalan’ny
tambajontran-tserasera facebook pejy “School Art” sy ny kaonty
facebook “Nofy Ram”. Marihina fa ny School Art, etsy Anosisoa
Ambohimanarina, eo ampitan’ny Banque BNI Anosisoa no anisan’ny
handray anjara amin’ny “concert des élèves”, izay hatao ny 19
desambra izao, etsy amin’ny Shoprite Analakely.
L’article “Portrait”, “paysage”…: mampianatra sary koa ny School art a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 18/12/2020
Vokatra ny vakiambiaty: midina tsikelikely ny vidim-bary
Tsara ny voka-bary tamin’ity taom-pambolena ity amin’ny ankapobeny ka mampidina ny vidiny. Tsy tena mbola miakatra kosa ny any Alaotra, Ambatondrazaka.Tapitra ny fotoan’ny maitsoahitra! Satria miaka-bokatra tsikelikely ny vary vakiambiaty, anisan’ny tena miantoka ny famatsiam-bary vokarina eto an-toerana. Araka ny fanadihadian’ny Masoivoho mpanara-maso ny vary (ODR), farany teo, lah.540 ST-PADR, tsikaritra fa midina tsikelikely ny vidim-bary eny an-tsena: ny vary akotry, ny fotsim-bary, amin’izao fotoam-pararano izao. Manodidina ny 3% ny salanisan’ny fihenam-bidy nandritra ny herinandro farany ny volana avrily 2019 teo.Nidina ho 910 Ar ny kilaon’ny akotry ny herinandron’ny 29 avrily raha 942 Ar ny herinandron’ny 22 avrily, nahitana fihenam-bidy 33 Ar/kg.Mihamihena koa ny vidin’ny fotsim-bary ka lasa 1 629 Ar/kg ny vary gasy ny herinandron’ny 29 avrily raha 1 661 Ar/kg ny herinandron’ny 22 avrily, nahitana fihenana -33 Ar/kg. Nidina ho 1 838 Ar/kg koa ny makalioka raha 1 898 Ar/kg teo aloha, nihena -60 Ar/kg. Nisongadina kosa ny fihenam-bidin’ny tsipala, nihena -97 Ar/kg, satria lasa 1 657 Ar/kg raha 1 754 Ar/kg tany aloha.Tsy ampy ny tolotra any AmbatondrazakaNiakatra kely (+10 Ar/kg) kosa, etsy andaniny, ny vary hafarana avy any ivelany, lasa 1 686 Ar/kg raha 1 676 Ar ny herinandro talohany, ary nitombo +15 Ar/kg ny eto Antananarivo, afa-tsy ny any Antsirabe sy ny any Manakara Atsimo, samy nihena -3%.Araka ny voalaza etsy ambony, nidina amin’ny ankapobeny ny vidim-bary avy eto an-toerana saika manerana ny faritra eto Madagasikara. Nahitana fisondrotana kosa anefa any amin’ny toerana vitsivitsy, toy ny any amin’ny distrikan’i Maevatanàna (+4%), ny distrikan’Ambatondrazaka (+6%). Araka ny fanazavan’ny ODR, nahatonga io fisondrotana io ny tsy fahampian’ny tolotra eo amin’ny tsena miohatra amin’ny tinady. Tsy nihetsika kosa ny eto Antananarivo sy ny manodidina.Njaka AndriantefiarinesyL’article Vokatra ny vakiambiaty: midina tsikelikely ny vidim-bary a été récupéré chez Newsmada.
Toetry ny andro: mahery vaika ny onja any atsimo
Mitohy hatramin’ny anio tontolo ny filazana fampitandremana ho an’ireo mponina mipetraka manodidina ny morontsiraka any atsimon’ny Nosy. Omaly, tafakatra 5 metatra ny haavon’ny onjan-dranomasina. Anio maraina kosa, hahatratra 3.5 metatra izany. Hihena tsikelikely io hamafin’ny onja io, raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby.Tsy tokony hatao ny miandriaka ho an’ireo mpanjono. Tsy tokony hiasa koa ny mpitatitra an-dranomasina amin’iny faritra iny hisorohana ny loza mety hitranga.Fa nahazo ny filazana loza avokoa ny mponina izay niarahana niasa amin’ny BNGRC. Mila mailo ny rehetra, indrindra ireo mikasa ny hiala sasatra any an-toerana.Nilaza ny mponina fa lasa lafobe ny trondro any atsimon’ny Nosy noho io fiakaran’ny ranomasina io, efa hatramin’ny herinandro manontolo. Miveri-maina ireo mpiala sasatra satria sady tsy azo ilalaovana ny rano noho ny rivotra manamafy ny onja no lafo ny trondro izay mampalaza ny any atsimo.Tatiana AL’article Toetry ny andro: mahery vaika ny onja any atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Hita faty nihantona tamin’ ny hazo ny tovolahy iray tany Maroantsetra, afak’omaly maraina. Tsy nahitana ratra hafa ny vatany, araka ny tatitra avy amin’ny mpitandro filaminana. Efa natolotra ny fianakaviana ny razana, taorian’ny fizahana. L’article Faty nihantona est apparu en premier sur AoRaha.
Asief: hosoloina fifaninanana hafa ny “Mada 2020”
Noho ny tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny 200, mandritra ny hetsika ara-panatanjahantena iray, nanambara ny filohan’ny Asief (Association Sportive Interministérielle pour l’ Entretien des Fonctionnaires), Andrianarison Jean Aimé , i Jhone Love, fa tsy azo eritreretina intsony ny hanatanterahana ny fifaninanana nasionaly, amin’ity taona ity. Na izany aza, tsy hipetra-potsiny ny mpitantana ny Asief fa hisy ny fivoriana hatao, anio, handinihana izay fifaninanana isam-paritra azo tanterahina, nohamafisin’i Jhone Love fa tsy maintsy hisy izany, ny volana novambra izao. Samy hanatanteraka izany, araka ny fahafahany avy ny amin’ny faritra, hoy hatrany ny fanazavany. Ho an’Antananarivo kosa, efa eo am-pandinihana ny hetsika hatao ny mpitantana. Hisy ny hetsika iray hiraisana eto an-drenivohitra, izay hatao ny volana novambra izao ihany koa. Manentana ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena rehetra manerana ny faritra, araka izany, ny filohan’ny Asief, hivonona hatrany amin’ny fifaninanana sy ny hetsika rehetra ho avy. Mi.Raz L’article Asief: hosoloina fifaninanana hafa ny “Mada 2020” a été récupéré chez Newsmada.